Mkhulu umthelela weCovid-19 kwezokuqashwa - Bayede News
KwelaboHlanga lomhla ziyisi-6 kuNdasa kwabikwa ukuthi “asengene amanzi endlini” kuchazwa ngomkhuhlane iCoronavirus nomthelela wawo eminothweni yamazwe omhlaba nakuleli lengabadi. Mkhulu umthelela walo mkhuhlane kwezokuqashwa nakuleli lakhithi. Sinqampuza ngale ndaba sibheka nomthetho wezokuqashwa ukuthi wona ungena kuphi kulo mthelela. Okokuqala njengoba ememezele uMengameli wezwe, lena yinhlekelele yezwe lonke esibopha ngabhandelinye siyisizwe, singabaqashi nezisebenzi. Le nhlekelele ifaniswa nesehlo semvelo okungeke kwasolwa muntu ngokuﬁ ka kwayo futhi kungeke kwasisiza lokho. Okuyimpoqo esizweni sonke ukuvikela impilo yethu sonke. Kanjalo nakwezokuqashwa, ukuvikela impilo yikho okufanele kulawule zonke izinhlelo nezinqumo ezithathwayo kulesi simo. Ukumiswa kokusebenza okwesikhashana ukugwema ukuhlangana kwabantu abaningi yikhona okuzosabalala ezindaweni eziningi zokuqashwa.
Lokhu sekuqalile ngoba inkundla yokuxazulula nokuthetha amacala ezokuqashwa (CCMA) isimemezele ukumisa wonke amacala nokusebenza kusukela ngoLwesithathu mhla zili-18 kuNdasa kuya mhla zili-14 kuMbasa kophezulu. Kulesi sikhathi umphakathi (izisebenzi nabaqashi) akuvumelekile ukuyothamela amacala nemihlangano emahhovisi ale nkundla. Yimisebenzi yezingxabano namacala okwenzeka ngezincingo nangobunye ubuchwepheshe bezokuxhumana noma okuyohlelelwa ukuhlanganela kwenye indawo okuyoqhubeka ngalesi sikhathi. Kuzoma nokusebenza kwezinkampani eziningi okusho ukumisa ukusebenza kwezisebenzi eziningi. Ukumiswa kokusebenza kusho ukulahleka komkhiqizo nengeniso lenkece kumqashi nezisebenzi. Kungahle kuqubule nezingxabano ezahlukene lokhu kumiswa kokusebenza. Abaqashi abanezinhlelo namandla okuhlinzeka lesi simo bayophefumula, futhi bayogwema izingxabano ezingahle ziqubuke ngenxa yokumiswa kwezisebenzi.
Phela okungenzeka ngokuxoxisana kuhlanganyelwe, ukuthi izisebenzi zinikwe ikhefu (ilivu) ngalesi sikhathi okusho ukuthi ziyokhokhelwa lesi sikhathi sokumiswa. Kunokwenzeka ukuthi lelo khefu lingelulwa sonke isikhathi sokumiswa kodwa lithathe ingxenye yaso, okuyosho ukuthi kunesikhathi sokumiswa okungeke zikhokhelwe sona izisebenzi. Njengoba sishilo, lokhu kuya ngezinhlelo, amandla omqashi, ubudlelwano bakhe nezisebenzi okanye kulawulwe futhi yizinkontileka zokuqasha eziphakathi komqashi nezisebenzi. Kwabanye abaqashi, izisebenzi ziyakwazi ukuqhubeka nemisebenzi yazo zisemakhaya zingahlanganyeli emagcekeni omqashi. Omunye umthelela walo mkhuhlane kungaba ukudilizwa kwezisebenzi okungenzeka manje noma emva kwesikhathi sokumiswa, noma emva kokudamba komkhuhlane lapho khona umqashi esengathi usekhinyabezekile, akasenamandla okuqasha zonke izisebenzi abekade enazo ngaphambi kokuﬁ ka kwalolu bhubhane.
Leli lishwa lokudilizwa liyodala ingxabano ngoba kungabukeka sengathi umqashi usejezisa izisebenzi ngenxa yenhlekelele yemvelo yomhlaba wonke. Umthetho uyakulawula ukudilizwa nenqubo yakho. Sesibhale kakhulu ngakho ukudilizwa. Kodwa, ukudilizwa kulesi simo kuyoba yinqayizivele emthethweni wezwe lakithi. Asazi ukuthi izinkantolo zona ziyowabheka ziwacubungule kanjani amacala okudilizwa aqhamuke, nabangelwe yile nhlekelele. Umthetho wezokuphepha emsebenzini ulawula ukuziphatha nokusebenza ngokuqikelela ukuphepha emsebenzini. Nezinhlelo zokuphephisa bonke abantu abahlanganyele emsebenzini eziqondiswe kulo mkhuhlane zizosho ukuthi seziyizilawulo ezikhishwa ngumqashi ezisebenzini zakhe. Kuyoba yishwa uma sekwenzeka futhi angeke sakuphika ukuthi kungenzeka ukuba nempikiswano mayelana nokulandela le milawulo yokuphepha.
Phela lo mkhuhlane ubangela ukuqiniswa noma ukwengezwa kwezilawulo zokuphepha emsebenzini, ezinye zazo okungenzeka kube nabangazozithanda noma babone sengathi ziyabacwasa noma kazibaboneleli ngokufanele. Maningi amacala alolu hlobo ezimbonini ezahlukene kuyimanje. Izinhlelo zokuphepha ezibhekiswe kulo mkhuhlane zingahle zandise izingxabano namacala aphathelene nokuphepha emsebenzini. Lokho kuyosho ukwanda kwamacala okuxoshwa aphathelene nezokuphepha okuwumthelela walolu bhubhane lomkhuhlane. Kuyoba ngelinye ishwa elibangelwa yile nhlekelele. Kukhona ubudlelwano bezokuqashwa obuvele buntekenteke obusengcupheni yokwehlukana noma yokuxabana ngoba kungethenjwana phakathi komqashi nomqashwa noma abaqashwa. Sekuyoba ngelinye ishwa ukuthi kuqubuke izingxabano namacala okuxoshwa abhaxiswe ezinhlelweni eziqondene nomkhuhlane weCoronavirus.
Phela nasebudlelwaneni bokuqashwa bakhona osomathuba abalindela ukusebenzisa noma yisiphi isimo ukuthi bafeze izinhloso zabo becashe ngalesi simo, kanti bebevele belindele ukugadlana. Kule nhlekelele bese bethi “wangiweza phela”. Le mithelela esiyibale lapha ithinta zonke izimboni, zonke izisebenzi nabo bonke abaqashi ezweni nasemhlabeni wonke. Kusukela embonini yasezindlini ngoba khona umqashi nomqashwa basondelene: bahlala endlini noma emagcekeni awodwa, badla ndawonye nemindeni yabo. Kunjalo nasembonini yasemapulazini. Umqashi nabaqashwa bayagudlana bathintane ngokuningi okubahlanganisayo. Nakhona ubudlelwano bokuqashwa buze buhlanganise nemindeni yabo. Embonini yezokuthutha sekukhulunywe kakhulu ngomthelela walolu bhubhane kuyo. Le mboni yiyo ehlanganisa isizwe, imiphakathi nemikhakha eyahlukene okusho ukuthi ingathwala, isabalalise igciwane uma kungaqiniswa izinhlelo zokuvikela kuyona.
Abasebenza ezimbonini zikaHulumeni eziletha izinsiza zomphakathi bona babhekane nomkhuhlane emehlweni. Ngibala abezempilo ezibhedlela, nasemitholampilo, nasezindlini zodokotela nabasebenza ukuthutha iziguli. Abezokuphepha nokuvikela: amasotsha, amaphoyisa nabemboni ezimele yokuphepha. Abezomthetho: ezinkantolo nasezinkudleni zamacala izisebenzi nazo zisengozini yokuhaqwa yilo mkhuhlane. Empeleni wonke umnotho nemikhakha yempilo yesizwe, ibhekene nenhlekelele njengoba esememezele uMengameli. Sonke siphoqeka ukubambisana selekelelane ukugwema lolu bhubhane ezweni lakithi. Nginethemba ebuholini nasesizweni sakithi ukuthi siyophumelela, siphephe kulesi sishingishane somkhuhlane. Ukuqwashisana ngomthelela emikhakheni eyahlukene, nokufundisana ngezimpawu zalesi sifo kanye nokuziphatha okufanele kuyosenza sinqobe uze wedlule lo mkhuhlane.
nguBheki Khumalo Apr 7, 2020